Maqaalka Chuck Hengel ee Martech Zone |
Maqaallada by Chuck Hengel
Astaamuhu waa inay ku jabaan silada internetka iyo khadadka si ay ula kulmaan rajooyinka macaamiisha. Sidii hore loogu maahmaahi jiray, Hirar kor u kaca ayaa qaada dhammaan doonyaha. Mabda 'isku mid ah ayaa khuseeya suuqgeynta macaamiisha wax ku oolka ah. Olole warbaahineed oo awood leh ayaa isku dhufan kara saameynta dhaqdhaqaaqyada kale ee suuq-geynta, laga bilaabo kordhinta boggaaga iyo raadinta taraafikada si kor loogu qaado kaqeybgalkaaga warbaahinta bulshada iyo xiriirka bulshada. Suuq galiyayaal waxtar leh ayaa tan ogaaday tan sanado waxayna geenayeen xeelado badan oo warbaahin ah si ay uga faa'iideystaan